Ny fasana foana - Church of God World Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-02 > Ny fasana foana
Ny tantaran'ny fasana foana dia hita ao amin'ny Baiboly ao amin'ireo Evanjely efatra. Tsy fantatsika marina hoe oviana Andriamanitra Andriamanitra no nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty tany Jerosalema tokony ho 2000 taona lasa izay. Saingy fantatsika fa ity hetsika ity dia hisy fiatraikany sy hanova ny fiainan'ny olona rehetra niaina teto an-tany.
Jesosy, mpandrafitra avy any Nazareta, dia nosamborina, voaheloka ary nohomboana tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa maty izy dia niresaka tamin'ny Rainy any an-danitra sy ny Fanahy Masina. Avy eo ny vatany nampijaliana dia napetraka tao amin'ny fasana vita tamin'ny vatolampy mafy, izay nasiana tombo-kase tamin'ny vato mavesatra teo anoloan'ny fidirana.
Pontio Pilato, governora romana, dia nanome baiko hiambina ny fasana. Naminany i Jesosy fa tsy hitazona azy ny fasana, ary natahotra i Pilato sao hanandrana hangalatra ny faty ny mpanaraka ny maty. Saingy, toa tsy azo inoana izany satria kivy izy ireo, feno tahotra, ka niafina. Hitan'izy ireo ny faran'ny habibiana nataon'ny mpitondra azy ireo - nokapohina saika nahafaty azy, nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana, ary rehefa afaka enina ora dia nijaly tamina lefona tamin'ny sisiny. Nesorin'izy ireo tamin'ny hazo fijaliana ilay vatana nokapohana ary nofonosiny lambam-panaka haingana. Tokony ho fandevenana vonjimaika izany raha tsy efa akaiky ny Sabata. Ny sasany nikasa ny hiverina aorian'ny sabata hanamboatra ny fatin'i Jesosy amin'ny fandevenana mety.
Tao amin'ny fasana mangatsiaka sy maizina ny fatin'i Jesosy. Rehefa afaka telo andro, ny lamba firakotra dia nanarona ny lo tsy ho ela ny nofo maty. Ny nipoitra avy tany aminy dia ilay mbola tsy nisy teo aloha - olombelona nitsangana tamin'ny maty sy be voninahitra. Natsangana tamin'ny maty avy tamin'ny Rainy any an-danitra i Jesosy ary tamin'ny herin'ny Fanahy Masina. Tsy tamin'ny fomba namerenana tamin'ny laoniny ny maha-olombelona azy, tahaka ny nataony tamin'i Lazarosy, zanakavavin'i Jairo ary zanaky ny mpitondratena tao Nain, izay nantsoina hiverina ho amin'ny vatany taloha sy ny fiainana an-tany. Tsia, tsy niverina tamin'ny vatany taloha fotsiny i Jesosy tamin'ny famelomana aina. Ny fanambarana fa Andriamanitra Ray, ny Zanany nilevina, dia nanangana an'i Jesosy ho fiainana vaovao tamin'ny andro fahatelo dia hafa tanteraka. Amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona dia tsy misy fampitahana farany na fanazavana eto an-tany azo inoana momba an'io. Nofonosin'i Jesoa ilay lamba lamba ary nivoaka avy tao am-pasana hanohy ny asany. Tsy hisy hitoviana intsony.
Fahamarinana tsy takatra
Fony Jesosy niara-nipetraka tamintsika teto an-tany tamin’ny maha-olombelona Azy dia iray amintsika Izy, olombelona nofo aman-dra izay niharan’ny hanoanana, hetaheta, havizanana ary fetra voafetran’ny fiainana mety maty. “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra tahaka ny Zanaka Lahitokan’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” (Jaona. 1,14).
Niaina tamin'ny firaisana tamin'ny Fanahy Masin'Andriamanitra tamin'ny naha-iray antsika izy. Ny teolojianina dia miantso ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo "Jesosy". Izy koa dia niaraka tamin'Andriamanitra ho ilay Teny Mandrakizay na Zanak'Andriamanitra. Zava-misy izay sarotra sy mety tsy ho takatra tanteraka io, raha jerena ny fetran'ny saintsika olombelona. Ahoana no ahafahan'i Jesosy ho Andriamanitra sy olona? Araka ny nilazan'i James Innell Packer, teolojiana ankehitriny, dia izao no zava-miafina roa amin'ny vidin'ny iray - ny olona marobe ao amin'ny maha-tokana an'Andriamanitra sy ny firaisana amin'ny Andriamanitra ary ny maha-olona ao amin'i Jesosy. Tsy misy na inona na inona amin'ny tantara foronina mahatalanjona toa an'ity Fahamarinana amin'ny Fahatongavana ho nofo »(Knowing God). Izy io dia foto-kevitra mifanohitra amin'izay fantatsika rehetra momba ny zava-misy marina.
Mampiseho ny siansa fa satria ny zavatra iray toa manohitra ny fanazavana dia tsy midika hoe tsy marina izany. Ireo mpahay siansa izay lohalaharana amin'ny fizika dia tonga tamin'ny fitrangan'ny trangan-javatra izay mivadika lojika mahazatra. Amin'ny ambaratonga fatra, ny lalàna mifehy ny fiainantsika andavanandro dia rava ary mihatra ny lalàna vaovao, na dia mifanohitra amin'ny lojika amin'ny fomba toa tsy misy dikany aza izy ireo. Ny hazavana dia afaka mihetsika amin'ny onja sy amin'ny potika. Ny sombintsombiny iray dia mety ho amin'ny toerana roa amin'ny fotoana iray. Ny quark subatomika sasany dia mila mihodina in-droa alohan'ny "mandeha" fa ny sasany kosa mila mihodina afa-tsy antsasaky ny revolisiona. Arakaraky ny hianarantsika momba ny tontolon'ny habetsahana no tsy dia misy toa azy. Na izany aza, ny fanandramana aorian'ny fanandramana dia mampiseho fa marina ny teôria kuantum.
Manana fitaovana hijerena ny tontolo ara-batana isika ary matetika no gaga amin'ny antsipiriany ao anatiny. Tsy manana fitaovana handinihana ny zava-misy avy amin’Andriamanitra sy ara-panahy isika - tsy maintsy manaiky izany isika rehefa manambara izany amintsika Andriamanitra. I Jesosy mihitsy no nilaza izany tamintsika sy ireo nasainy nitory sy nanoratra. Ny porofo ananantsika avy amin’ny soratra masina sy ny tantara ary ny zavatra iainantsika manokana dia manohana ny finoana fa iray amin’Andriamanitra i Jesosy ary iray amin’ny olombelona. « Efa nomeko azy ny voninahitra nomenao Ahy, mba ho iray izy, tahaka ny maha-iray Antsika, ary Izaho ao aminy, ary Hianao ato amiko, mba ho iray tanteraka izy, ka ho fantatry izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy. Tiavo izy tahaka ny nitiavanao Ahy » (Jaona 17,22- iray).
Rehefa natsangana Jesosy dia tonga tamin'ny lafiny vaovao amin'ny fiainana miaraka ireo natiora roa ireo, izay nanjary karazanà famoronana vaovao - olona be voninahitra izay tsy iharan'ny fahafatesana sy ny fahalovana intsony.
Mandosira hiala ny fasana
Taona maro, angamba 60 taona mihitsy aza taorian’io fisehoan-javatra io, dia niseho tamin’i Jaona i Jesosy, ilay mpianany farany tamin’ny voalohany nanatrika ny fanomboana azy. Efa antitra i Jaona ary nonina tao amin’ny nosy Patmo. Hoy i Jesosy taminy: “Aza matahotra! Izaho no voalohany sy farany ary velona; ary efa maty Aho, ary indro, velona mandrakizay mandrakizay Aho, amena! Ary manana ny fanalahidin’ny maty sy ny fahafatesana aho » (Apokalypsy 1,17-18 SLTS).
Diniho tsara indray izay lazain'i Jesosy. Maty izy, velona ankehitriny ary mbola hiaina mandrakizay. Izy koa dia manana lakile manokatra ny lalana handosiran'ny olon-kafa amin'ny fasana. Na ny fahafatesana aza dia tsy nisy toa azy talohan'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty.
Mahita fampanantenana mahagaga avy amin’ny andininy iray hafa izay lasa cliché isika: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Joannes). 3,16). I Jesosy, izay natsangana ho amin’ny fiainana mandrakizay, dia nanamboatra ny lalana ho antsika mba hiaina mandrakizay.
Rehefa natsangana tamin'ny maty Jesosy, dia tonga tamin'ny lafiny vaovao ny toetrany roa izay nanjary karazana famoronana vaovao - olona be voninahitra izay tsy iharan'ny fahafatesana sy ny fahalovana intsony.
Mbola misy fanampiny
Talohan’ny nahafatesan’i Jesosy, dia nivavaka toy izao izy: “Raiko ô, tiako ho ao amiko koa izay nomenao Ahy, mba hahitany ny voninahitro izay nomenao Ahy; fa efa tia Ahy ianao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao » (Jaona 17,24). Nilaza i Jesosy, izay niara-niaina tamintsika teto an-tany nandritra ny 33 taona teo ho eo, ary tiany ny hiaraka aminy mandrakizay ao amin’ny tontolo iainany tsy mety maty.
Nanoratra hafatra mitovitovy amin’izany ho an’ny Romanina i Paoly hoe: “Fa raha zanaka isika, dia mpandova koa, dia mpandova an’Andriamanitra sy mpiara-mandova amin’i Kristy, satria miara-miaritra aminy isika mba hatsangana koa ho amin’ny voninahitra miaraka aminy. Fa matoky aho fa izao andro fahoriana izao dia tsy mampandanja ny voninahitra haseho amintsika » (Romana 8,17- iray).
I Jesoa no olona voalohany nandresy ny fiainana an-tany. Tsy nikasa ny ho irery Andriamanitra. Tao an-tsain’Andriamanitra foana izahay. “Fa izay nofidiny no notendreny koa mba hitovy endrika amin’ny Zanany, mba ho Lahimatoa amin’ny rahalahy maro Izy” (Romana . 8,29).
Na dia tsy mbola takatsika aza ny vokany feno, dia eo am-pelatanana ny hoavintsika mandrakizay. «Ry malala, efa zanak’Andriamanitra isika; nefa mbola tsy hita izay ho toetsika. Fantatsika fa rehefa haseho, dia ho tahaka azy koa isika; fa ho hitantsika Izy araka ny maha izy azy »(1. Johannes 3,2). Ny azy dia antsika koa, ny fomba fiainany. ny fomba fiainan’Andriamanitra.
Tamin'ny alàlan'ny fiainany, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty, dia nasehony antsika ny dikan'ny hoe olombelona. Izy no olona voalohany nahatratra ny fahalavorariana rehetra izay tao an-tsain'Andriamanitra ho an'ny olona hatramin'ny voalohany. Saingy tsy izy no farany.
Ny marina dia tsy afaka mankany irery isika: «Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako” (Jaona 14,6).
Toy ny nanovan’Andriamanitra ny tenan’i Jesosy mety maty ho vatany be voninahitra, no hanovan’i Jesosy ny vatantsika: “Izy no hanova ny vatantsika manetry tena, mba ho tonga tahaka ny vatany be voninahitra Izy, araka ny hery izay ahazoany mampanaiky ny zavatra rehetra.” (Filipianina) 3,21).
Rehefa mamaky tsara ny soratra masina isika dia manomboka mipoitra ny topy maso mialoha momba ny ho avin'ny zanak'olombelona.
“Fa ny anankiray tamin’izy ireo dia nanambara indray mandeha hoe: “Inona moa ny olona, ​​no heverinareo azy, ary ny Zanak’olona, ​​no tadiavinareo? Nataonao ambany vetivety noho ny anjely izy; nosatrohanao voninahitra sy haja izy; ny zavatra rehetra dia efa nataonao ho eo ambanin’ny tongony.“Rehefa napetrany eo ambanin’ny tongony ny zavatra rehetra, dia tsy nisy voavonjiny izay tsy nanaiky Azy” (Hebreo). 2,6- iray).
Nanonona ny salamo ny mpanoratra ny Taratasy ho an’ny Hebreo 8,5-7, nosoratana taonjato maro talohan’izay. Hoy anefa izy: “Tsy mbola hitantsika anefa izao fa manaiky azy ny zavatra rehetra. Fa Jesosy, Izay ambany kely noho ny anjely, dia hitantsika nosatrohina voninahitra sy haja noho ny fijalian’ny fahafatesana, mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan’Andriamanitra” (Hebreo). 2,8- iray).
Ireo vehivavy sy lehilahy izay nisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ny Paska dia nanambara tsy ny fitsanganany tamin'ny maty ihany, fa tamin'ny fahitana ny fasany foana ihany koa. Tamin'izany no nahafantaran'izy ireo fa ny Tompony nohomboana tamin'ny hazofijaliana dia nitsangana tamin'ny fiainany vaovao.
Fa inona no mahatsara ny fasana foana rehefa avy eo fa Jesosy tenany tsy mila azy intsony? Amin'ny maha-vita Batemy azy ao aminy, niara-nalevina taminy isika mba hahafahantsika mivoatra miaraka aminy amin'ny fiainam-baovao. Fa ohatrinona amin'ny lasa no mavesatra antsika matetika hatrany; ohatrinona manimba ny fiainana no mbola mametra antsika! Ny ahiahintsika rehetra, ny enta-mavesatsika sy ny tahotsika rehetra, izay efa nahafatesan'i Kristy, dia avela handevina ao am-pasany isika - efa nisy toerana malalaka tao hatramin'ny nananganana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty.
Ny anjaran'i Jesosy no anjarantsika. Ny hoaviny no hoavintsika. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia maneho ny fahavononan'Andriamanitra hamatotra ny tenany tsy azo ivalozana amintsika rehetra amin'ny fifankatiavana mandrakizay ary hiakatra amin'ny fiainana sy ny fiombonan'ny Andriamanitra telo izay iray. Izany no drafiny hatrizay ary tonga Jesosy hamonjy antsika amin'izany. Vitany izany!
avy amin'i John Halford sy Joseph Tkach